Articles tagged 'zimbabwe energy regulatory authority'
Zera seeks prepaid meter deals 8 January 2019 HARARE - Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) says it is set to establish a pool of agents to sell prepaid electricity meters. Prepaid meters have recently been in high demand after Zesa Holdings (Zesa) began to bill consumers using the prepayment model, which has been vital for control...
Zera licenses Mutoko independent power producer 15 November 2018 HARARE - The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) has granted an energy generation licence to a private company. Riverside Power Station has been licensed under the Electricity Act to construct, own and operate a solar power plant at Musvaire Village in Mutoko, Mashonaland East Province...
Econet gets licence to generate solar energy 17 April 2018 HARARE - ECONET Wireless Zimbabwe (Econet) has been given a licence to generate power to meet the electricity and energy needs at its Willowvale premises in Harare, according to a notice carried in the media. The Willowvale complex is a major hub for Econet's switching and network operations...
Govt phases out diesel 500 6 March 2018 HARARE - The government has started implementing a programme to phase out diesel 500 through the introduction of diesel 50, this, in a bid to improve the fuel quality and offer affordable prices. In a statement issued yesterday, the Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) said the move is ...
Fuel price hike: People say 'no' 15 May 2014 HARARE - Economists have warned that the imminent hike in the price of fuel will trigger the rise in prices of basic commodities, transport and a catastrophic increase in the cost of living. The inflationary pressures on the already battered Zimbabwean economy resulting from a possible increas...
Fuel prices to go up 14 May 2014 HARARE - Cash-strapped Zimbabweans should brace for an imminent fuel hike after government gazetted new pricing regulations. Statutory Instrument 80 of 2014, crafted by the Energy ministry in consultation with the Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) is expected to drive fuel prices up,...
Zera submits salary schedule to president 11 February 2014 HARARE - The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) has submitted its salary schedule to President Robert Mugabe following a government directive. This comes amid massive expose´ of abnormally hefty salaries earned by parastatals’ top management. In the wake of that, government recently ...
E10 way to go 1 December 2013 HARARE - Fuel pumps around Zimbabwe have recently begun to feature a new E10 sticker, albeit one less shocking than the bottom line of your receipt. The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) recently rewrote the rules defining allowable fuel mixtures, opening the door for producers to bl...
Zera gives fuel dealers ultimatum 9 November 2013 HARARE - Fuel dealers have been given a seven-day ultimatum to label their petrol pumps “blend” to avoid any misrepresentations to consumers. The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) yesterday said retail outlets that fail to comply with the ultimatum will face the full wrath of the law...
Zera threatens 'rogue' fuel traders 8 August 2013 HARARE - The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) has threatened to revoke licences of fuel dealers who hike prices without government's approval. This comes amid reports that traders have hiked prices of the commodity — both petrol and diesel — by as much as $0, 20. “Any fuel licens...
Zera dispels fuel price hike 6 August 2013 HARARE - The Zimbabwe Energy Regulatory Authority (Zera) has dispelled media reports of fuel prices hikes following a highly disputed election held last Wednesday. Gloria Magombo, the Authority's chief executive, said that the results of the elections were not in anyway linked to any changes i...